Ndeupi mutemo weCAN-SPAM? | Martech Zone
Monday, May 9, 2016 Chipiri, May 10, 2016 Douglas Karr
Mitemo yeUnited States inovhara mameseji ekutengesa emaimeri akagadziriswa muna 2003 pasi pe Federal Trade Commission yeCAN-SPAM Mutemo. Kunyange zvanga zvave pamusoro pemakore gumi… Ini ndichiri kuvhura bhokisi rangu rekunyora zuva nezuva kune email isina kukumbirwa iyo ine ruzivo rwekunyepa uye isina nzira yekubuda. Ini handina chokwadi chekuti mirau yacho yanga ichishanda zvakadii nekutyisidzira kwemari inosvika madhora zviuru gumi nezvitanhatu pakutyora.
Sezvineiwo, iyo CAN-SPAM Mutemo haidi mvumo yekutumira email se mimwe mitemo yekutumira mameseji yenyika tasimbisa. Izvo zvazvinoda ndezvekuti iye anogamuchira ane kodzero yekuti iwe umire kutumira maemail. Izvi zvinozivikanwa senzira yekubuda-kunze, inowanzo kupihwa kuburikidza nekisimo yekuzvinyoresa inosanganisirwa mutsoka yeemail.
ichi mutungamiriri wekutanga kuCAN-SPAM Mutemo kubva kuEverCloud inokupa iwe neruzivo rwese rwaunoda kuti uzive kuti unoteerera nemutemo.
Zvinodiwa Zvakakosha zveCAN-SPAM Mutemo:
Usashandise nhema kana kutsausa musoro musoro ruzivo. Yako "Kubva," "Ku," "Pindura-Ku," uye kuendesa ruzivo - kusanganisira iro rinobva zita renzvimbo uye kero yeemail - inofanirwa kuve yakajeka uye kuziva munhu kana bhizinesi akatanga meseji.
Usashandise inonyengera misoro yenyaya. Mutsara wenyaya unofanirwa kunyatso kuratidza zviri mukati memeseji.
Ziva meseji seye kushambadzira. Mutemo unokupa iwe yakawanda nzira yekuita izvi, asi iwe unofanirwa kuburitsa pachena uye pachena kuti meseji yako kushambadza.
Udza vanogamuchira kwaunowanikwa. Meseji yako inofanira kusanganisira yako chaiyo kero yepositi. Iyi inogona kunge iri yako kero yemugwagwa, bhokisi reposvo iwe wakanyoreswa neUS Postal Service, kana bhokisi rakavanzika retsamba iwe wakanyoreswa neyekutengesa tsamba yekugamuchira inomiririra yakagadzwa pasi pePoint Service mirau.
Udza vanogamuchira nzira yekusarudza kunze kwekugamuchira ramangwana email kubva kwauri. Meseji yako inofanira kusanganisira tsananguro yakajeka uye inonzwisisika yekuti mugashiri angasarudza sei kuwana email kubva kwauri mune ramangwana. Nyora chiziviso nenzira iri nyore kuti munhuwo zvake azive, averenge, uye anzwisise. Kugadzirwa kwekushandisa kwemhando saizi, ruvara, uye nzvimbo zvinogona kugadzirisa kujekesa. Ipa kudzorera email kero kana imwe nyore Internet-based nzira yekubvumira vanhu kuti vataure sarudzo yavo kwauri. Unogona kugadzira menyu kubvumira mupi kuti asarudze kubva kune mamwe marudzi emeseji, asi iwe unofanirwa kusanganisira sarudzo yekumisa meseji dzekutengesa kubva kwauri. Ita shuwa kuti spam firita yako haidzivise izvi zvekusarudza-kubuda.
Kudza zvikumbiro zvekubuda kunze nekukasira. Chero ipi nzira yekubuda iwe yaunopa inofanira kukwanisa kugadzirisa zvikumbiro zvekubuda kwemazuva makumi matatu mushure mekunge watumira meseji yako. Iwe unofanirwa kuremekedza chikumbiro chekusarudza-kubuda mukati memazuva gumi ebhizinesi. Iwe haugone kubhadharisa muripo, unoda kuti mupi wekupa iwe chero ruzivo rwekuzvizivisa pachedu kupfuura email kero, kana kuita kuti mugashiri atore chero danho kunze kwekutumira mhinduro email kana kushanyira peji rimwe chete pawebhusaiti yeinternet semamiriro ekukudza kukumbira kubuda. Pane imwe nguva vanhu vakakuudza kuti havadi kugamuchira mamwe mameseji kubva kwauri, haugone kutengesa kana kutumira avo maemail kero, kunyangwe muchimiro chetsamba yekutumira. Icho chete chinosarudzika ndechekuti iwe unogona kuendesa makero kune kambani yawakashandira kuti ikubatsire iwe kutevedzera iyo CAN-SPAM Mutemo.
Tarisa uone zviri kuitwa nevamwe panzvimbo yako. Mutemo unojekesa kuti kunyangwe iwe uchihaya imwe kambani kubata yako email kushambadzira, haugone kubvumidza kure basa rako repamutemo kutevedzera mutemo. Zvese zviri zviviri kambani ine chigadzirwa chinosimudzirwa mumeseji uye iyo kambani inotumira meseji inogona kubatwa zviri pamutemo kuve nemhosva.
Kuona iwe uchienderana nemitemo yeCAN-SPAM ndiro danho rekutanga rekutora maemail kuburikidza nekusefa kweemail uye mubhokisi rako rekunyora. Kuteerana neCAN-SPAM hazvireve kuti yako email iri kuzoigadzira kuinbox, hazvo! Iwe unogona kunge uchinge wakasarudzika uye kuvharirwa, kana kutumirwa wakanangana nejunk folda zvichienderana nekununurwa kwako, mukurumbira, uye kuiswa kweinbox. Iwe uchazoda chechitatu-bato chishandiso senge 250ok nezvazvo!
Tags: inogona kuita spamcan-spammameseji ekutengesafederal trade commissionftckubudaspam firitaspam faindimaemail ekutengeseranaisu posvo yebasachii chi-can-spam chiito
Mawere Benchmark Curve pane Mobile App Mushandisi Kuchengetwa